HONOR 9X ဈေးနှုန်း/အချက်အလက်များ/ သုံးသပ်ချက်များ/ HONOR မြန်မ
MM ကုန်ပစ္စည်း Smartphone HONOR 9X
အလင်းဖြာ X ဒီဇိုင်
မရှိကနေ အရှိသို့ ကျွန်တော်တို HONOR 9X နောက်ဖုံကို ချောမွတ်သော အရောင်တစ်လျပ်လျပ်ဖြစ်သော X သဏ္ဍန်ကိုပေါ်လွင်စေသည်။သင့်၏ မျက်လုံကို မတူညီသောအမြင်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
မတူညီသော မြင်ကွင်းကျယ် ကမ္ဘာ
သင့်ကို အံအားသင့်စေသော အရာတွင်နစ်မြှုပ် လိုက်ပါ။ HONOR Fullview Display 6.59" 1.
ယခုတွင်မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံး ဗွီဒီယို ၊ ဂိမ်း၊ စာအုပ် အပြည် လွှမ်းမိုးနိုင်ပြီး။ သင့်၏ ဖုန်းမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးကို အလေ့အလွှင်မရှိအောင်။
HONOR 9X အရှေကင်မရာ နှစ်မြှုပ်စနစ်ပါဝင်သောကြောင့် အတားအစီးမဲ့ ခစားချက်များ ရရှိနိုင်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို Pop up selfieကင်မရာလုပ်ဆောင်ချက်ကို လက်လျော့ထားသည်။ ဓာတ်ပုံခဏရိုက်ကူးရာတွင် ကင်မရာကို2စက္ကန့်အတွင် ထွက်ပေါ်ပေးသည်။ ရိုက်ကူးပြီးနောက် အလိုအလျောက် နှစ်မြှုပ်ပေးသည်။2
မတူညီသော ရှုထောင့်ကနေ၍ မတူညီသော လှုပ်ရှားမှုကို ရိုက်ယူလိုက်ပါ။
48MP အဓိကကင်မရာ လှပသော ပုံရိပ်များရိုက်ကူးလိုက်ပါ။ မြင်ကွင်းကျယ် 120° super wide-angle မှန်ဘီလူးဖြင့် ရှုခင်းနှင့် သေးငယ်သော ပတ်ဝန်ကျင်ကို ပိုမိုကျွမ်းကျင်းစွာ ရိုက်ကူးပေးနိုင်ပါသည်။
48MP ကင်မရာတွင် AIS Super Night modeပါဝင်​သော​ကြောင့် သင့်ကို ကြည်လင်ပြတ်သားသော ညအမှောင်ဓာတ်ပုံများကို ရိုက်ကူးပေးနိုင်ပါသည်။
အံအားသင့်စေသော တစ်ကိုယ်ရေး ဓာတ်ပုံ
ခေတ်မီသော AI နည်းပညာတွက်ချက်မှုအောက်၌ 48MPအဓိက ကင်မရာနှင့် အနုစိပ်ကင်မရာ ပူပေါင်းလုပ်ဆောင်ပေးခြင်းဖြင့် လှပသေသပ်သော ထင်ရှားမြင်သာသော တစ်ကိုယ်ရေးဓာတ်ပုံကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။
အရှေကင်မရာ နှင့် အနောက်ကင်မရာ နှစ်ခုလုံးတွင် 3D ပုံရိပ်အလင်းဖြင့် သင့်ကို စတူဒီယို
အလင်းရောင်ကဲ့သိုသော အလင်းနှင့် အံအားသင့်စေသော ပုံများရရှိနိုင်ပါသည်။
တည်ငြိမ်​သော Pro-Grade ဗွီဒီယို
AI ဗွီဒီယို ငြိမ်သက်သော နည်းပညာကျေးဇူးကြောင့် HONOR 9X သည် တည်ငြိမ် ငြိမ်သက်သော 720p ဗွီဒီယိုကို အသုံးပြုပေးထားသည်။ ပျံသန်းရာတွင်လဲ ထေ့ငေါ့ခြင်းမရှိအောင် ရိုက်ကူးပေးသည်။
*အမှန်တကယ် ရိုက်ကူးရာတွင် တည်နေရာ အနေအထားနှင့် ရိုက်ကူးကွဲပြားမှုကြောင့်ကွဲပြားနိုင်သည်။
စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော ၊ ညဏ်ရည်ထက်မြတ်သော ၊ ယဉ်ကျေးသိမ့်မွေ့သော
စွမ်ဆောင်ရေးမြင့်မားမှုနှင့် တုန့်ပြန်မှု မြန်ဆန်​သော Kirin 710F လုပ်ဆောင်မှု 8ခုပေါင်းစပ်မှုဖြင့် သင့်ကြိုက်နှစ်သက်သော ဂိမ်း နှင့် appများကို တည်ငြိမ် မြန်ဆန်စွာ လုပ်ဆောင်ပေးသည်။
Laptopဆိုဒ် သိုလှောင်မှု ပမာဏ
ကြီးမားမှုများ ထပ်မံ၍ မလိုအပ်တော့ပါ။
HONOR 9X သည် 512GB အထိ ထပ်မံသိုလှောင်သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။ ထိုကြောင့် သင့်၏ ဓာတ်ပုံ ဗွီဒီယို နှင့် ဖိုင်များကို အလွယ်တကူသိမ်းဆည်နိုင်သည်။3
4000mAh4 တစ်နေ့သုံး ဘက်ထရီ
Type-C USB Port လွယ်ကူးရိုးရှင်းရန်
နှောင်းနှေးမှုမရှိသော ဂိမ်းဆော့ခြင်း။ Kirin 710F၏ ထောက်ပံပေးမှုဖြင့် GPU Turbo 3.0
သည် သင့်ကို မြန်ဆန် နှောင်းနှေးမှုကင်းသော ဂိမ်းခံစားချက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
AI Signal အားတိုးမြင့်စက်
ထူးကဲမြန်ဆန်သော 4G နှင့် Wi-Fi လိုင်းအား မြန်ဆန်ရယူခြင်း
HONOR 9X သည် 4Gနှင့် Wi-Fi လိုင်းဆွဲအားဖြစ်ပေါ်တတ်သော လိုင်းအား များလိုက်နည်းလိုက်များကို ပြန်လည်း ထိန်းညှိပေးသည်။
စံအရည်အသွေးများကို ​သေချာကြပ်မတ်ထားသည်။ 7
အရည်အသွေးမြင့်မားသော ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း ။ ချွင်ချက်များကိုလက်မခံ
ပါဝါခလုတ် အကြိမ်​ရေ 200,000
အသံခလုတ် အကြိမ်ရေ 50,000
USBပေါက် ကြာရှည်ခံမှု စမ်းသပ်ခြင်း အကြိမ်ရေ10,000
Touch screen အထိအတွေ ကြာရှည်ခံ စမ်းသပ်ခြင်း အကြိမ်ရေ800,000
25kg အလေးဖိအားစမ်းသပ်ချက် အကြိမ်ရေ2000
အလွန်ဆုံး အလေးခံမှု 70 KG
အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းစ စမ်းသပ်ခြင်း 55°C အပူချိန် / 95% စိုထိုင်းစအချိန်120 နာရီ
ထပ်ခါတစ်လဲလဲ အပူချိန် စမ်းသပ်ခြင်း -20°C~55°C ကြား နှင့် 78ကြိမ်လည်ပတ်
HONOR မျက်နှာပြင်ပြည် ဖန်သားဆိုသည်မှာ ဘေးငယ်သော ဘေးဘောင်းနှင့် ကြီးမားသော screen-to-body အချိုးကိုဆိုလိုပါသည်။ ထောင့်ဖြတ်အချိုး အလျားတိုင်းတာရာတွင်း မျက်နှာပြင်မှာ 6.59လက်မရှိသည်။ တိုင်းတာချက်များကို HONOR စမ်းသပ်ခန်းမှ တိုင်းတာရရှိသော အချက်များဖြစ်သည်။
*စမ်းသပ်ချက်များကို HONOR စမ်းသပ်ခန်းမှ ရရှိသောရလဒ်ဖြစ်သည်။
ဗူခွံတွင်း SD ကတ်ပါဝင်ခြင်း မရှိပါ
ပုံမှန်ပမာဏသည်. HONORစမ်းသပ်ခန်းမှ ရရှိသော ရလဒ်ဖြစ်သည်။ ဘက်ထရီသက်တမ်းသည် သုံးစွဲမှုပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပြားနိုင်သည်။
ဒေတာ အချက်အလက်များနှင့် စံနှုန်း ရလဒ်သည် HONOR စမ်းသပ်ခန်းမှ ထွက်ပေါ်သောရလဒ်ဖြစ်သည်။သီချင်းနှင့် ဗွီဒီယို ဖွင့်ချိ်န်များကို နာကျပ်များဖြင့် စမ်းသပ်ထားသည်။
GPU Turbo 3.0သည် Kirin 710F ကိုအခြေခံ၍ software နှင့် Hardwareများကိုပေါင်းစပ်ပြီး ရုပ်ပုံတွက်ချက်မှုများကို ပြုလုပ်ပေးသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ တစ်ချက်သတိထားပေးပါ။ ၎င်းသည် အချို့​သော ဂိမ်းများကိုသာ ထောက်ပံပေးသည်။
ဒေတာ အချက်အလက်များနှင့် စံနှုန်း ရလဒ်သည် HONOR စမ်းသပ်ခန်းမှ ထွက်ပေါ်သောရလဒ်ဖြစ်သည်။
* အထက်ပါ ဓာတ်ပုံနှင့် ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက်သည် ကိုးကာရည်ညွှန်းရန်သာ ဖြစ်သည်။အမှန်တစ်ကယ် ထုတ်ကုန်အချက်အလက်နှင့် လက္ခဏာ(အပြင်ပုံပန်း သဏ္ဌာန်, အရောင်,အရွယ်အစား မပါဝင်ပါ)အမှန်တကယ်ပါဝင်သော အချက်အလက် (နောက်ခံဓာတ်ပုံ,UI,သင်္ကေတ မပါဝင်)ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။
** အားလုံးသော ဒေတာအချက်အလက်များသည် HONOR စမ်းသပ်ခန်း သတ်မှတ်ထားသော စံချိန်စံညွှန် နိယာမသဘော ရလဒ်ဖြစ်သည်။(စမ်းသပ်ချက်အကြောင်းအရားများကို အထက်ပါ စာမျက်နှာများကို ဖတ်ရှုလိုက်ပါ)ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း အချက်အလက်များ၊ဆော့ဖ်ဝဲဗားရှင်း၊app လုပ်ဆောင်ချက် အခြေနေ နှင့် နေရာဒေတာပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများသည် အမှန်နှင့်နည်းနည်းကွဲပြားနိုင်သည်။အသုံးပြုမှု ရရှိသော အချက်အလက်များကို အမှန်ယူပါ။
*** HONORသည် ထုတ်ကုန်တွဲများ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုများနှင့် ပံ့ပိုးမှု့ဆိုင်ရာ အကြောင်းအချက်များ အပါအဝင် အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီပြောင်းလဲမှုများကြောင့် တိကျမှန်ကန်သော ထုတ်ကုန်အချက်အလက် အသေးစိတ်အချက်များနှင့် အင်္ဂါရပ်များကို ပံပိုးရန်အတွက် Huawei/HONORသည် အထက်ပါ အချက်အလက်စာမျက်နှာများရှိ စာသားဖော်ပြချက်များနှင့် ပုံများအား အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ပါမည်။ သို့မှသာ ၎င်းတို့သည် ထုတ်ကုန်အစစ်အမှန်၏ ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းဆောင်ရွှက်ချက်။အသေးစိတ်သတ်မှတ်ချက်များ။ အညွှန်းများနှင့် အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ကိုက်ညီနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများသည် ကြိုတင် အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ထုတ်ကုန် အချက်အလက်များသည် ပြောင်းလဲမှုများနှင့် ပြင်ဆင်ချက်များအတိုင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။